November 2011 – democracy for burma
Thai press: More pieces on the “massacre of 13” jigsaw_Mekong Killing_Joint Statement on
On November 30, 2011 November 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
Yesterday, ASTV Manager Online, that has for years been reporting on news in the Golden Triangle, presentedaclearer (but still incomplete) picture of what happened to the two Chinese cargo ships and their crew last October.
(Photo: Khao Sod)
According to the report, the two ships were seized by Naw Kham, “the freshwater pirate”, who has been runningaprotection racket in the area since 2007, on4November. One of the crew women had then madeacall to Thailand’s Chiang Saen to inform about what had taken place. This had sealed the fate of herself and the rest of the crew, it says.
On the next day, the two boats were stormed and taken by the Thai Army’s Pha Mueng Task Force.
On6October, Pha Mueng and the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) officials heldapress conference to explain the previous day’s events.
According to them, Pha Mueng received information at 06:00 on5October about the hijacking of the two boats and had accordingly organizedateam to intercept them.
At 10:30, the two ships turned up and seeing the Thai officials trying to head them off, the unidentified armed men on the ships fired at the officials and later escaped inaspeedboat. The catch, Pha Mueng and ONCB said, included 1 dead armed man and 920,000 pills of “yaba” (methamphetamines).
On7October, the dead crewmen and women started floating up on the river one after another.
On 28 October, Thai police summoned9Pha Mueng officers to face two charges: killing of 13 Chinese crewmen and women and concealing evidence, which the officers had promptly denied.
However, there are still two Jigsaw pieces missing, the report says: two well known men living in the nearby Maesai district: “Uncle N” and “Mr S”, who is Uncle N’s relative. (A source in Maesai told SHAN “Uncle N” was none other than Olarn Somphongphan aka Chamras Phacharoen,aknown “Chao Paw” (Godfather) in the district.
Due to the disappearance of the two who are believed to have gone underground, at least three questions remain unanswered:
Where did the drugs originate?
Who seized the boats and killed the crew?
Who would be the recipient of the drugs?
A local who wished to remain anonymous said one way to find it out is to look at the year’s events that had made headlines in the area and piece them together:
A ship belonging to Kings Romans Casino on the Laotian side of the Mekong seized and 19 crewmen abducted. Zhao Wei, the casino owner, was reported to have paidahefty B 22 million ($730,000) ransom to Naw Kham
Burmese and Laotian security forces attacked Naw Kham’s men at Sri Dorn Mee island, 25 km north of the Triangle. 20 of his men were said to have been killed, while4of the wounded came to Chiangrai for medical treatment
Thailand’s Deputy Prime Minister announced that Kings Romans was raided and 20 sacks of yaba pills were seized
Pha Mueng seized two cargo ships, one either belonging to Zhao Wei or his associate Ah Ming
Shweli River (Dams in Warzone) Under Seige Report Press Relaes english_burmese
Joint Statement of Ministerial Meeting on Cooperation in Patrol Law Enforcement Along Mekong River
On November 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (United Nationalities Federal Council(Union Burma)
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (United Nationalities Federal Council(Union Burma)၏ ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မီတီ အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဟောင်စွန်ခရိုင် နယ်စပ်တနေရာ၌ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာ (၂၈) ရက်နေ့က ကျင်းပခဲ့သည်ဟု အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ တဦးက ဆိုပါသည်။ အဖွဲ့ ဝင်ပေါင်း (၆)ဖွဲ့ ပါဝင်ပြီး၊ တဖွဲ့ လျှင် ဗဟိုကော်မီတီဝင် (၃) ဦးစီဖြင့် ထိပ်တန်း ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
“အထူးသဖြင့်တော့ ဒီအစည်းအဝေးမှာ လောလောဆယ် စစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ ကိစ္စကို ဦးစားပေး ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမမှာ အဖွဲ့ ဝင်တွေ သဘောတူထားတာကတော့ အစိုးရရဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး ကမ်းလှမ်းချက်ကို တဖွဲ့ ချင်း လက်ခံဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲဖို့ မဟုတ်သေးပါဘူး။ သဘောက နအဖ အစိုးရဖက်က နိုင်ငံရေးအရ မဆွေးနွေးမချင်း၊ အပစ်ရပ်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အခုအချိန်ထိဘဲလေ အဲဒီမူအပေါ်မှာ ဘယ်အဖွဲ့ မှ မချိုးဖေါက် သေးပါဘူး။ အခုလည်း အဲဒီအဆင့်ကို ဆက်ထိမ်းကြဖို့ ညှိနှိုင်းကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်”လို့ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူတဦး ကပြောပါသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ်များမှာ၊ နိုင်ထောမွန် (ဥက္ကဌ)၊ နိုင်ဟံသာ (အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး)၊ နိုင်ကွယ်ဟောင် မွန် (ဗဟိုကော်မီတီဝင်) တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ UNFC အဖွဲ့ ဝင်တိုင်းသည်၊ နအဖအစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် တကြိမ်စီဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါသည်။ ပဏာမ သဘောတူထားသည်မှာ (၁) တဖွဲ့ ချင်းဆွေးနွေးခွင့် ရှိသော်လည်း အပစ်အ ခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်မခံသေးပါ၊ (၂) အပစ်အခတ် ရပ်စဲမည့်အချိန်ကို အားလုံးသဘောတူပြီးမှ အားလုံးရပ်စဲရန်။ (၃) နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးခွင့် ရလာခဲ့လျှင် စုပေါင်းဆွေးနွေးရန် တို့ဖြစ်ပါသည်။
“ ဒီလိုပါ၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးဆိုတာ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ အားလုံးက အနှစ်သာရအရ သိရှိထားပြီးသားပါ။ နောက်ဆုံးတော့ နအဖဖက်က အချိန်ဆွဲတဲ့ ပေါ်လစီဘဲနဲ့ဘဲ အဆုံးသတ်ခဲ့တယ်။ အစိုးသစ်တက်လာမှ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေး မယ်ဆိုတဲ့ နအဖရဲ့ အပစ်အခတ် မရပ်စဲခင် အချိန်က ပြောထားတဲ့ စကားတွေဟာ လုံးဝကို မေ့ထားလိုက်တယ်။ အခုလိုလာ ပြန်ပြီး၊ ဘာလိမ်ဦးမလဲ၊ ဘယ်လိုဖိအားတွေ၊ အကြပ်ကိုင်မှုတွေ ပေးဦးမလဲ၊ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ထိ တောက်ခံနိုင် မလဲဆိုတာ ညှိနှိုင်းကြဖို့ အထူးကို လိုအပ်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ UNFC စဖွဲ့ ကတည်းက အခုချိန်ထိပေါ့လေ ဗဟို ကော်မီတီအဆင့်ဆိုလို့တခါမှ မဆွေးနွေးရသေးတဲ့အတွက် ဒီအစည်းအဝေးကို ကျင်းပရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”ဟု အဆိုပါအ စည်းအဝေးတက်ရောက်သူက ဆိုပါသည်။
UNFC အဖွဲ့ ဝင်များမှာ ချင်းအမျိုးသား တပ်ဦး (CNF)၊ ကချင်ပြည် လွပ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO)၊ ရှမ်းပြည် တိုးတက်ရေးပါတီ (SSPP)၊ ကရင်နီ အမျိုးသား တိုးတက်ရေးပါတီ (KNPP)၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU)၊ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (MNSP)၊ ပအို့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ချုပ်(PNLO)၊ ပလောင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး တပ်ဦး (PSLF)၊ ရခိုင်ပြည် အမျိုး သားကောင်စီ (ANC)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက်တစ် သမဂ္ဂ(LDU)၊ ၀အမျိုးသား အဖွဲ့ ချုပ်(WNO)၊ ကချင် အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNO)တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီUNFC သည်၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ(၁၂) ရက်နေ့မှ (၁၆)ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပသော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ ညီလာခံတွင် ဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။
UNFC ၏ နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်များမှာ၊ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ပြည်နယ်တွင်း ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အပြည့်အ၀ရှိသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဖြစ်ပါသည်။
Fighting flares in northern Myanmar(Video)
On November 30, 2011 November 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
skirmish took place between KIA soldiers under 5th Brigade and Burmese Army soldiers at Dawhpum yang village–Shan villages burned down
A skirmish took place between KIA soldiers under 5th Brigade and Burmese Army soldiers at Dawhpum yang village on November 29, 2011 at 11:30 am. The battle lasted for about 20 minutes. After KIA soldiers retrieved from the battlefield, Burmese Army bombarded Dawhpum yang village with artillery shells, said local sources.
Two Shan villages, Namwai village with about 60 households and Hpagyi village with about 20 households, near Dawhpum yang were burned down by Burmese Army soldiers. Local sources reported at least 23 houses in Namwai village and 8 houses in Hpagyi village were burned down to the ground. The Burmese government soldiers burned the two Shan villages down without any substantial reason, said sources. Continue reading “skirmish took place between KIA soldiers under 5th Brigade and Burmese Army soldiers at Dawhpum yang village–Shan villages burned down” →
ABSDF (USA) Condolence
AHRC_BURMA: Mother of infant allegedly kidnapped and raped by Burmese military army
On November 30, 2011 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
Urgent Call: Donation need for Arakan Liberation Party (ALP) Rammarwaddy Battalion
On November 30, 2011 December 1, 2011 By Burma Myanmar newsIn BurmaLeaveacomment
ALP Calendar 2012
ALA Rammarwaddy Battalion is fighting side with KNLA
Dear Comrades ,Brothers and Sisters,
Friends of Burma : They need your Support -you can order the 2012 ALP Calender and send some Donation to
ALP Thailand contact- alpthailandoffice.gmail.com
Vice-President of ALP